Inona avy ireo fahaiza-mividy jiro anatiny? Ahoana ny fandaminana ny jiro ao anaty?
Miaraka amin'ny fivoaran'ny tsenan'ny jiro, ny karazany sy ny karazana jiro anaty trano izao dia efa voafantina be izao, ary matetika ny jiro anaty trano dia karazana jiro sarobidy amin'ny mpanjifa eo amin'ireo jiro fanaovan-jiro. Tena miahiahy momba ny fividianana, ny fampifanarahana ary ny fametrahana azy izahay. Inona avy ireo fahaiza-mividy amin'ny l ...
Fampirantiana jiro iraisam-pirenena 2021 Guangzhou: mandresy ny zava-tsarotra rehetra ary tazomy araka ny fandaharam-potoana hametrahana fanjaitra afovoany ho an'ny indostria.
Nanomboka tamin'ny 3 ka hatramin'ny 6 Aogositra, nosokafana tamim-pahibemaso tao amin'ny foibe fampidirana entana sy entam-barotra any Chine ny fampirantiana fahazavana faha-26 Guangzhou (Gala). Ny fampirantiana dia mandrakotra velaran-tany 185000 metatra toradroa sy orinasa 2036 avy amin'ny firenena 9 sy ny faritra manerantany nanatrika. Amin'ny maha fanokafana ny taona ...
2021 Fihaonana an-tampon'ny faritry ny morontsiraka Greater Bay, fivoriambe iraisam-pirenena, natao tany Guzhen
Tamin'ny 27 Mey, ny "Fihaonamben'ny fifanakalozan-kevitry ny varotra ivelany any Greater Bay 2021" izay noforonin'i Guangdong Optoelectronics and Lighting Association, Lihe Lighting Expo Center ary singa hafa dia natao tao amin'ny Hotel Lihe Westin, Guzhen. Manam-pahaizana amin'ny indostria e-varotra miampita sisintany, ...
Jiro LED: misy teknolojia vaovao manova ny vahaolana maivana amin'ny jiro fotsy
Ny LED fotsy azo ovaina dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny jiro mifantoka amin'ny olombelona. Hatramin'izao dia misy vahaolana samihafa ankehitriny, saingy tsy misy mora ampiharina na lafo vidy mba hanafainganana ny fiparitahan'ny jiro mifantoka amin'ny olombelona amin'ireo tetik'asa maritrano. Fomba vaovao ho an'ny adjustab ...
Vanim-potoana Replenishment 丨 2021 Greater Bay Area Lighting Industry Summit tampon'ny sisintany momba ny varotra ivelany dia fahombiazana tanteraka
Fihaonana an-tampon'ny varotra ivelany miampita sisintany hanampiana ireo orinasan-jiro handeha any ivelany. Tamin'ny May 27th, nokarakarain'ny Guangdong Optoelectronics and Lighting Association, Lihe Lighting Expo Center, Zhongshan Kaishijie Supply Chain Co., Ltd., Zhongshan Infront Media Co., Ltd., Yifeng E-commerce College, China ...
Azonao atao ve ny manohitra ireo jiro jiro LED avo lenta ireo?
Volana Luna volana "Luna Lunar Lamp" dia volana kely vita amin'ny fiberglass. Ny savaivon'ny tontolony dia 8 cm ka hatramin'ny 60 cm. Afaka misafidy hazavana isankarazany ny olona arakaraka ny firafitry ny fampiharana isan-karazany. Ohatra, ny "volana lehibe" dia azo atao chandelie ...